Usasaza njani ngokuPhila kwiTwich? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungasasaza njani ngokuqhubekayo?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 319
Ukusasazwa bukhoma KwiTwitch yindawo apho ilizwi lakho linokuviwa khona bukhoma kunye nabaphulaphuli bakho.
Ukusasaza ngqo Ngokubini, kufuneka ube nesiseko esiqinileyo kwaye ube ngumyili obalaseleyo womxholo, imidlalo, umculo, isiselo, ukutya, ubugcisa, ezemidlalo kunye namabali, awakho nawabanye ngokugunyaziswa kwangaphambili. Into ebaluleke kakhulu kukuba unomdla wento oyenzayo kwaye unokwabelana ngayo, apho ababukeli bakho abakulinde kwiTwich baba ngabalandeli bakho.
Olunye uphawu ukusasaza bukhoma kwiTwich kukuba unganikezela ngento entsha kubaphulaphuli bakho ngokwenza uphawu lwakho, ii-emoticons zakho kunye nezinye izinto. Ncokola noluntu lwakho ukuze bahlaziywe ngeziganeko zamva nje.
Nxibelelana nabaphulaphuli ababukhoma kwiTwich, kukwenza imali, ukufumana imbuyekezo kunye nejelo lakho liyinzuzo, konke oku kuya kuxhomekeka kuwe kunye nendlela okhula ngayo njenge-streamer, ungaqhubela phambili ekubeni lilungu elilula kodwa ube liqabane lokusasaza, okoko nje uguqula isitayile sakho esihle.
Usasaza njani ngokuhlala kwiTwich
Kulula kakhulu ukwenza usasazo ngqo kwiTwich, ngokwenza nje la manyathelo alandelayo:
Yiya kwiseshoni apho uneakhawunti.
Xa iseshoni iqalile, cinezela iqhosha "Ukuhambisa umdlalo" ngesiNgesi uyifumana njengo "Yabelana".
Qwalasela into ofuna ukuyidlulisa.
Ngoku cinezela "Khetha ukuhambisa" kwaye ungasasaza iTwich bukhoma.
Izikhokelo zosasazo ngqo kwiTwich. Isikhokelo sokusasaza ngqo kwiTwich senziwe ukubonelela ngokhuseleko, ukhuseleko kunye nokuphila komntu wonke eTwich.
Apha ngezantsi siza kuchaza izihloko zezikhokelo zokusasaza ngqo kwiTwich.
Ukophulwa kwelungelo lokushicilela
Amalungelo obunini obunini bemveliso
Ukuhanjiswa kweenkcukacha zabucala ngaphandle kwemvume kwangaphambili
Ubunqunu bephonografi kunye nawo nawuphi na umxholo wesondo
Khuthaza ukungcungcuthekiswa kunye nentiyo
Ubuqhetseba kunye noogaxekile
Ukukopa kwimidlalo ye-Intanethi
Ungabenza njani abaBukeli ngokuJonga uMjelo wakho oBukhoma kwiTwich
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukumisela umlambo wakho.
Ababukeli bakho baziva ukuba bamkelekile.
Yenza enye indawo yomlingo ukuze i Abaphulaphuli bafuna ukubuya ngeyona mincili ilungileyo.
Yima phakathi kwesihlwele ukujonga kwakho okuhle okutsalwa ngabaphulaphuli bakho, kwaye ke uya kuhlala ubuya.
Sukujongela phantsi abathathi-nxaxheba abangathethiyo, Mhlawumbi kuba abekho kwincoko ngabo babona uninzi losasazo lwakho ngqo kwiTwich.
Musa ukubeka inzala ngaphandle kweintanethi Oku akuthethi ukuba xa uyeka ukusasaza ngqo kwiTwich, phelisa uqhagamshelo, endaweni yoko kufuneka uzixhase ngenethiwekhi yakho, iwebhusayithi, okanye ezinye iindlela ukuze uluntu lwakho lwazi ukuba usaqhagamshelwe nokuba awukho kwi-Intanethi. kwiTwich.
Njalo hlaziya, Uya kugcina abaphulaphuli bakho kunye nababukeli abatsha benomdla kwimilambo yakho ephilayo kwiTwich
1 Usasaza njani ngokuhlala kwiTwich
2 Ungabenza njani abaBukeli ngokuJonga uMjelo wakho oBukhoma kwiTwich
Usasaza njani kwiTwich?
Ungasasaza njani kwi-twitch?